July 17, 2021 April 24, 2022 0
Iyo Reno 6 Pro inoratidza inokwanisa kweiyo Dimension 1200 - pamutengo unorema.
OPPO irikuita zvese zvakanaka zvinhu muna 2021; iyo Tsvaga X3 Pro ndiye mumwe nhare dzakanakisa dzeAndroid, uye iyo Reno akateedzana ndiyo nzira inoshanda kune anofarira eiyo Galaxy A52. The Reno 5 Pro 5G debuted mwedzi mitanhatu yadarika, asi mutsivi wayo atova pano.
Iyo Reno 6 Pro ikozvino yave kuwanikwa mumisika yepasirese, uye kune mashoma masimendi maficha: iyo MediaTek Dimension 1200 chikuva inopa yazvino Cortex A78 cores, uye kune yakakura 4500mAh bhatiri iyo inoshandisa 65W inokurumidza kuchaja. Sezvo kukwidziridzwa kuchienda, hapana zvakawanda zvekutaura nezvazvo pano. Iyo Reno 6 Pro inogovera yakafanana 90Hz AMOLED skrini, yakafanana 64MP kamera uye 32MP pamberi pekupfura, uye yakafanana dhizaini dhizaini seyakatangira. Asi iyo yakagadziridzwa Hardware inofanirwa kuipa iyo pamucheto pamusoro peiyo Reno 5 Pro, uye iri padiki padiki bhatiri rinoitendera kuti igare kwenguva yakareba.
Pakupedzisira, iyo Reno 6 Pro iri iterative sekuvandudzwa kunowanikwa muna 2021, asi chokwadi chekuti foni iyi inoshanda senheyo yeiyo OnePlus Nord 2 zvinoita kuti zvinyanye kunakidza. Iyo Nord 2 ichaisa iyo Dimension 1200 chipset, yakafanana bhatiri ine 65W yekuchaja nekukurumidza, uye inoshandisa imwecheteyo chassis seReno 6 Pro kunyangwe iine mashoma tweaks kuitendera kuti ibude.
Chaizvoizvo, iyo Reno 6 Pro inotipa kutarisa kwekutanga kune OnePlus 'iri kuuya yepakati-ranger, asi haisi yose inofamba zvakanaka. Nenhare ichidhura mubhadharo pamusoro peyaakatangira, inosuwa pane yakakosha hunhu muchikamu ichi: kukosha. Saka ngatitarisei izvo zvitsva, uye kana uchifanira kutora foni.
Chinonyanya kukosha: Iyo Reno 6 Pro inosanganisa iridescent gradient pateni ine simba Hardware. Iyo 90Hz AMOLED mapaneru inoshamisa mukushandisa kwemazuva ese, iwe unowana iwo iwo iwo mwero wekuita semaficha emureza, uye iyo lens ye64MP inotora mifananidzo yekumira. Iyo software inoda basa - OPPO's yekuvandudza purogiramu iri glacial - asi iyo hombe nyaya iri mitengo; kune dzimwe nzira dzakawandisa pane ino mutengo mutengo iyo inokupa iwe yakawanda yemari yako.
Yakanaka dhizaini ine inoratidzika gradient
Yakanaka 90Hz AMOLED skrini
Yakakura yekutanga kamera
Yese-zuva-bhatiri hupenyu ne65W kuchaja
Zvinodhura zvakanyanya pane izvo zvauri kuwana
Hapana ruzha rwe stereo
Hapana IP chiyero
Hapana kubaya waya
, 39,990 paFlipkart
Oppo Reno 6 Pro Mutengo uye kuwanikwa
Reno 6 Pro yakatanga kuChina pakupera kwaMay, ndokuenda kuIndia muna Chikunguru 14, 2021. Foni inowanikwa mu8GB / 128GB uye 12GB / 256GB akasiyana, uye inotengeswa mumhando mbiri dzemhando: Aurora neBlack. . Chishandiso chave kuita pre-odha muIndia, nekutengesa kuri kutanga muna Chikunguru 23 kwe ₹ 39,990 ($ 537). Izvo ndezve 12GB / 256GB vhezheni; panguva ino, iyo 8GB modhi haisi kuuya kuIndia.
Oppo Reno 6 Pro Kugadzira uye kuratidza
Kubva pane dhizaini yekuona, iyo Reno 6 Pro haina kusanzwisisika kubva kune yakatangira. Iyo ine mativi akaenzana akamonyororwa, imwechete svelte 7.6mm furemu, uye imba yekamera iyo ingango fananeka - iyo flash module yave padhuze neyechina kamera module, asi makuru maringi akakomberedza matatu makuru makamera akafanana kune ese ari maviri majaira. Iyo module yekamera pachayo yakagadzirwa kunze kwepurasitiki, uye dhizaini yacho inondiyeuchidza nezve iyo Imwe Kuwedzera 9R.
Iyo Reno 6 Pro ine dhizaini yakafanana neyaakatangira asi ine inonakidza pateni nyowani.
Kunyangwe dhizaini yacho pachayo isina kuchinja zvakanyanya, iyo Reno 6 Pro ndeimwe yemafoni anotaridzika epakati-epakati aunogona kutenga nhasi. Iyo yakajeka profil inosanganiswa neiyo yakanaka iridescent pateni - pane nyowani Reno Glow dhizaini panguva ino - inoita kuti foni ibude pachena, uye iyo yakanyanya-yakatetepa bezel inowedzera screen real estate.
Kana iri iyo Reno Glow gradient, iyo foni ikozvino inoshanduka pakati pemhando dzakasiyana dzebhuruu negoridhe zvinoenderana nechiedza chinorova pamusoro payo, uye chinoita kuti kumashure kupenye. Ini ndiri fan of gradient dhizaini, uye ini ndinoda kuti chishandiso chinobata sei mwenje pamakona akasiyana. Iyo matte yekupedzisira inoita kuti zvive nyore kubata uye kushandisa foni futi, uye kana iwe uri mumusika kune chishandiso chinotendeuka misoro, izvi zvichaita zvakangonaka. Kana iwe uchifunga kuti dhizaini iri ine hukasha, iyo foni inowanikwa mune yakasviba ruvara sarudzo.
Nekuti iyo Reno 6 Pro ine hombe 4500mAh bhatiri, huremu hwayo hwawedzerwa nezita rezita 4g kusvika 177g; ichiri imwe yefoni dzakareruka muchikamu ichi. Iwe unowana iro bhatani remagetsi kurudyi uye vhorumu rocker kuruboshwe, ine mutauri wekutanga akasvikira padyo padyo ne USB-C yekuchaja chiteshi. Sezvazviri zvino kuitika kune mazhinji epakati-renhare mafoni, iwe haugone kuwana 3.5mm jack pano.
Kuuya kudivi rekuratidzira rezvinhu, hapana musiyano wakakura kwazvo pamusoro peiyo Reno 5 akateedzana. Iyo Reno 6 Pro inoshandisa 90Hz Samsung-yakagadzirwa AMOLED skrini ine kupenya kunokwira kusvika kuma800nits kana uchiona HDR10 zvemukati. Foni inosimudza inoyemurika maererano nekupenya - ini handina kuona chero nyaya kunyangwe pasi pekupenya kwakapenya - uye nekutenda kune iro AMOLED pani, mavara anotaridzika zvisingaite.
Uye senge iyo Reno 5 Pro, iwe unowana Gorilla Girazi 5 rukanda pachiratidziro icho chinopa yakadzikama nhanho yekudzivirira kubva kudonha uye kukwenya. Nekuti hapana zvakawanda zvachinja, iyo Reno 6 Pro inosuwawo paruzha rwe stereo. Iine mbozhanhare mbozhanhare dziri kutora imwe nzira yematauri stereo mazuva ano, uku kusiiwa kukuru kubva kuOPPO. Mutauri mumwe chete anonzwika zvakanaka zvakakwana pachayo, asi kumisikidza stereo ingadai yakaita sarudzo iri nani, kunyanya uchifunga kuti foni inodhura zvakadii.
Oppo Reno 6 Pro mutambo
Ipo OPPO isina kubvongodza fomula yakawandisa neiyo Reno 6 Pro, imwe nharaunda iyo mudziyo watora kukwidziridzwa kwakakura ndeyemukati Hardware. Foni inofambiswa neMediaTek's Dimension 1200 chikuva, iine imwe Cortex A78 musimboti inokwira kusvika ku3.0GHz, matatu maA78 macres ku2.42 .55GHz, uye ina simba-inoshanda A2.0 macres paXNUMXGHz.
Software RuvaraOS 11, Android 11
kuratidza 6.55-inch 90Hz AMOLED
chipset 3.0GHz Kuwanda 1200
chengetedzo 128GB / 256GB
Kumusoro Kamera 1 64MP ƒ / 1.7 (yepakutanga)
Kumusoro Kamera 2 8MP ƒ / 2.2 (yakafara-kona)
Kumusoro Kamera 3 2MP ƒ / 2.4 (macro)
Kumusoro Kamera 4 2MP ƒ / 2.4 (mufananidzo)
Kubatana Wi-Fi 6, BT 5.2, NFC
bhatiri 4500mAh, 65W
mavara Dema, Bhuruu, Aurora
miganhu 160 X 73.1 X 7.6mm
Kune zvakare mapfumbamwe-epakati Mali-G77 GPU pasi pehood, uye iwo beefier macores akabatanidzwa pamwe nekuwedzera wachi anopa Reno 6 Pro kukurudzira kunoonekwa mukuita pamusoro peyaakatangira. Ini ndaishandisa iyo foni kungori pasi pevhiki mbiri uye handina kuona chero kuderedzwa chero. Muchokwadi, muzviitiko zvakanyanya zvezuva nezuva-zvekushandisa, zvinoenderana nemagadzirirwo emureza seSpapdragon 870.
Icho chibvumirano chekuedza kweMediaTek mumakore maviri apfuura kuti inokwanisa kugadzira yepakati-renji chikuva iyo inogona kuyera kusvika kune yakanakisa iyo Qualcomm inofanira kupa; hazvishamise kuti iyo Nord 2 irikushandisa iyo Dhivhosi 1200 panzvimbo yeiyo Snapdragon chipset.
Iko hakuna kushomeka kwe RAM kana kuchengetedza chero, iine base modhi inopa 8GB ye RAM uye 128GB yekuchengetedza. Kufanana neyakatangira, iyo Reno 6 Pro inouya neiyo Wi-Fi 6 yekubatanidza, uye inowana nyowani Bluetooth 5.2 modem. Kune zvakare NFC uye AptX HD seyakajairwa, uye chimwe chinhu icho OPPO chakarovererwa zvachose ndiyo haptics; mota yekudengenyeka inounza mhinduro yakanaka uye ndeimwe yeakanakisa mukirasi ino.
Kana zviri zvehupenyu hwebhatiri, ini ndakawana nyore nyore kukosha kwezuva kunze kweiyo 4500mAh bhatiri, ichivhaira pasi peanenge maawa mashanu echiratidziro-pa-nguva mukati menguva ye18 maawa. Hupenyu hwebhatiri hausati wave nyaya kumafoni mazhinji e2021, uye iyo Reno 6 Pro inoenderera nenzira imwecheteyo; haufanire kubhadharisa foni iyi zuva risati ratombobuda kunyangwe nekushandisa zvakanyanya.
Uye kana iwe uchida kuchiraja, pane 65W yekuchaja nekukurumidza iyo inobhadharisa bhatiri zvizere pasi pemaminitsi makumi matatu. Yangu quibble ndeyekuti iyojaja pachayo haishande pamusoro peiyo PD PD protocol, zvichireva kuti hauzokwanise kubhadharisa mamwe madivayiri nayo. Kumwe kusiyiwa pane iyo Reno 35 Pro ndeyekuchaja isina waya, asi haina kunyanya kukundikana kufunga kuti paine mafoni mashoma epakati-epakati ane chimiro.
Oppo Reno 6 Pro kuri
Sezvakangoita dhizaini, kwete yakawanda yakawanda yashanduka padivi rekamera yezvinhu. Iyo Reno 6 Pro inoratidzira 64MP f / 1.7 yekutanga lens pamwe ne8MP yakafara-angle module, 2MP macro, uye 2MP portrait lens. Kune imwechete 32MP shooter kumberi zvakare, uye nedhizaivho, OPPO iri kumisikidza vhidhiyo semusiyano.
Kune nyowani bokeh vhidhiyo modhi, asi iyo Reno 6 Pro haina kumira kubva kune yakatangira.
Iyo Reno 6 Pro ine chinhu chitsva chinonzi Bokeh Flare Portrait Vhidhiyo iyo inopa cinematic bokeh painorekodha vhidhiyo. Iyo ficha inokutendera kuti umise iyo bokeh nhanho uye inotsamira paAI kuti iwane mwenje masosi kumashure uye gadzira bokeh mavara, uye inoshanda mushe mushe mukushandisa chaiko-kwenyika. Asi chandinonyanya kubvisa pane vhidhiyo kumberi ndechekuti foni ichiri kungogumira ku4K pa30fps isina kugadzikana.
Iyo resolution inoderera kusvika ku1080p kana iwe uchida kushandisa iyo yakavakirwa-mukati EIS, asi chokwadi chekuti chishandiso chakamiswa sevhidhiyo-yekutanga sarudzo uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchitsvaga Kune mafoni ari muchikamu ichi anopa 8K vhidhiyo pa30fps uye 4K pa60fps ine kugadzikana uye HDR, uye nekusiya zvinhu izvi, iyo Reno 6 Pro iri kumashure. Uyezve, iyo kamera inoda kuwana kune yako foni mamiriro; hazvishande kana iwe ukaramba kupinda. Izvo hazvisi zvinowanzoitika kune mafoni mazhinji, saka ini handina chokwadi zvachose kuti nei OPPO iri kuibvunza pano.
Kana iri iyo kamera kamera pachayo, iwe unowana iwo ekupfura modhi akaiswa mubhoni pazasi, toggles yeAI, flash, timer, HDR, uye Google Lens, uye switching pakati peakasiyana lenzi uye zoom mazinga. Runhare runokurumidza kudhizaina pamusoro pechinhu uye hapana kunonoka kana kupfura zvakamira. Iwe unowana yakawanda yekupfura modhi yakanamirwa kure kuseri kweMore tebhu, inosanganisira yemanyorerwo maitiro anokupa iwe granular kutonga pamusoro pako kupfura.
Iyo 64MP kamera inozivikanwa huwandu, uye kungofanana neiyo Reno 5 Pro, inotora yakanakisa mifananidzo mune chero chero mwenje mamiriro. Iyo mhedzisiro mifanikiso ine yakawanda yehuwandu, zvishoma kune isina ruzha mazinga, uye inowanzo kuve neyakawedzeredzwa mhando kwavari - ichivaita kuti vataridze vakanaka pavanogovaniswa pasocial media mapuratifomu. Foni inoita basa rakakura mune yakaderera-mwenje zvakare, ichichengeta zvakasarudzika uye kuvimbika kwemavara uku ichideredza ruzha. Iwe unozoona zviyo zvinoonekwa kumucheto mune mashoma mashoma-mashoma mabara anotorwa mune zvishoma kune ambient mwenje, asi zvakazara foni inoita basa rakanaka kuchengetedza iyo ruzivo.
Iyo 8MP yakafara-angle lens yakanaka masikati, ichiendesa mapikicha ane yakafanana neyemhando profili seiyo huru lens. Nekudaro, zvinonetsa kutora mapfekero akanaka mune yakaderera-mwenje mamiriro. Kana iri 2MP macro, uri nani pane kusashandisa lens zvachose; iyo yakamisikidzwa-yekutarisa module inoda yakawanda yekuedza uye mhedzisiro mapfuti haapfuure muster. Vhidhiyo yekurekodha zvakare yakanaka zvakakwana pachayo pachayo, asi pane inoonekwa jitter mune yakaderera-mwenje zviitiko, kunyanya mu4K.
Pakazara, iyo Reno 6 Pro inoenderera nenzira yakafanana seyakatangira kana zvasvika pakutora mapikicha, uye ini handigone kubatsira asi kunzwa kuti OPPO yaifanira kunge yakaita zvakawanda pane vhidhiyo kumberi kuti foni ibude.
OPPO yakachinja kutaridzika uye kunzwa kweColorOS mumakore maviri apfuura, uye mhedzisiro iyi interface inonzwa yazvino uye yakabwinyiswa. Foni inomhanya ColourOS 11.3 yakavakirwa paApple 11, uye iyo nyowani vhezheni inotora mashoma anonakidza maficha akatorwa kubva kuOxygenOS. Kune imwe nyowani yemitambo modhi iyo inogovera yakafanana interface seOxygenOS, uye iwe unowana kunyange APD maitiro akafanana neiyo Canvas AOD.
ColourOS 11 inowana yakawanda chaizvo, asi ichiri kushomeka kana zvasvika pakuvandudzwa.
ColourOS 11 zvakare ine yakasimba yekugadzirisa maturusi, uye inorova yakanaka chiyero maererano nezvimiro. Pane inokurumidza kuvhura modhi iyo inoita kuti iwe utange zviito uye maapps nekukurumidza paunovhura foni yako. Unogona kuimisa muzvirongwa, uye inoshanda nenzira inotevera: mushure mekuvhura foni uchishandisa in-screen module, ramba uchitsikirira pasi munzvimbo iyoyo kunyangwe iwe uchinge wasvika kumba kwechidzitiro. Ipapo iwe uchaona menyu inobata anosvika mashanu maapplication kana zviito, uye iwe unogona kudhonza munwe wako pamusoro kune inoenderana icon kuvhura iyo app kana chiito.
Ini handidi kuona kukosha kwayo kana zvasvika pakuvhura app - pane kunonoka kwemasekondi mashoma menyu isati yasimudza, saka uri nani pakuvhura foni uye kuvhura iyo programu zvakananga. Asi zvinobatsira pakuita zviito, sekufonera munhu waunosangana naye kana kuwedzera chiitiko kukerenda yako. NaOnePlus ikozvino uchishandisa iyo ColourOS codebase, tsvaga maficha akadai kuita nzira yavo kuNord 2 uye iri kuuya OnePlus mafoni.
Nyaya hombe neColorOS 11 ndeye yekuvandudza frequency. OPPO inoramba ichisara kumashure kwevaikwikwidza navo munzvimbo iyi, uye izvo zvinofanirwa kuchinja kana ichida kukwikwidza muchikamu chepakati-renji kupokana nezvinodiwa zveSamsung.
Oppo Reno 6 Pro Mukukwikwidza
Pane huwandu hukuru hwesarudzo kana iwe uri mumusika wepakati-renhare foni izvozvi. Iyo Realme X7 Max ndiyo imwe nzira yakanaka kune iyo Reno 6 Pro sezvo ichiratidzirawo Dimension 1200 uye yakafanana 64MP kamera kumashure. Iwe zvakare unowana 120Hz AMOLED skrini, stereo kurira ine 3.5mm jack, uye 4500mAh bhatiri ine 50W inokurumidza kuchaja. Iko hakuna mutsauko mune software futi, iine Realme UI iine ColourOS senheyo. Kutanga kunze kwe ₹ 26,999 ($ ​​360), iyo X7 Max inodimbura iyo Reno 6 Pro nemuganho wakakura.
Ikozve kune iyo Nord 2 yekufunga. Iyo foni inoratidzira padyo-yakafanana Hardware kune iyo Reno 6 Pro, uye inomhanya OxygenOS 11.3, yekutanga OxygenOS kuvaka iyo yakavakirwa paColorOS codebase. Tichafanirwa kumirira kuti tione kuti software yacho inopesana sei nekutanga iterations yeOxygenOS (ongororo ichibuda munguva pfupi), asi kubva pakuona kwehardware, pane zvakawanda zvekuda neNord 2. Iyo Imwe Kuwedzera 9R zvakare iri stellar imwe nzira kune iyo Reno 6 Pro. Iyo ine Hardware ine simba, 120Hz AMOLED skrini, yakachena interface ine shoma bloatware, uye ichawana mamwe magadziriso esoftware.
Ehezve, kana iwe uchida imwe yakasarudzika sarudzo, iyo Galaxy A52 inoenderera kuve yakasarudzika sarudzo. Iyo foni ine 90Hz pani, uye nepo iyo Snapdragon 732G isingaenzane kusvika kune MediaTek Dimension 1200, ine hunhu hwakaringana kumakesi mazhinji ezuva nezuva ekushandisa. Iyo A52 zvakare ine makuru makamera, emazuva ano interface ane akawanda maficha kupfuura iwe aunoshandisa, uye ichawana matatu eApple ekuvandudza.
Oppo Reno 6 Pro Unofanira kutenga here?
Iwe unoda foni yakapfava ine dhizaini inokwezva
Uri kutsvaga mureza-tier Hardware
Iwe unoda akavimbika makamera
Iwe unoda ese-ezuva-bhatiri hupenyu ne65W wired kuchaja
Iwe unoda foni ine kukosha kwakanaka
Iwe unoda kutsanya software inogadziridza
Unoda waya isina waya
Pakazara, iyo Reno 6 Pro inoenderera ichisundira OPPO muchikamu chepakati-chikamu. Nenhare ichitangisa mwedzi mitanhatu chete mushure mekuunzwa kweiyo Reno 5 akateedzana, hapana chinhu pano chinonyatso kuoneka. Izvo zvakati, iyo Dhivhosi 1200 inopa yakafanira mashandiro ekuwedzera, uye iyo bhatiri inowedzera inoderedza chero kunetseka pamusoro pefoni kupererwa muripo zuva risati rapera.
Saka kunyange zvingave zvisina shanduko shanduko seyeReno 5 dzakateedzana, iyo Reno 6 Pro yakarovera mabhesiki ayo ane 90Hz AMOLED skrini, stellar 64MP kamera, uye yemazuva ano ColourOS 11 interface. Matambudziko akafanana akatambudza iyo Reno 5 Pro akaenderera mberi pano futi; hausi kuzowana zvigadziriso nenguva, hapana ingress yekudzivirira, uye iwe unorasikirwa neasina kuchaja futi.
Pakupedzisira, mitengo inoita kuti zvive zvakaoma kukurudzira iyo Reno 6 Pro. Iko kune zvakawandisa zvakagadzirwa zvinopa beefier Hardware, zvirinani kamera, uye zvirinani zvirinani kukosha. Nhare dzeOPPO hadziwanzo kuendesa yakanakisa kukosha, neyemugadziri pachinzvimbo ichivimba netiweki yayo isingabvumirwe kusunda kutengesa, asi kunyangwe mune iyoyo mamiriro Reno 6 Pro inonzwa yakawandisa. Sarudzo yekupa chete iyo 12GB / 256GB modhi munyika haisi yehungwaru.
Izvo zvakati, iyo Reno 6 Pro haisi yakaipa foni nechero chiyero - ndiyo yakanakisa OPPO yepakati-ranger yandakamboshandisa zvakadaro - asi inodhura zvakanyanya kune izvo zvazvinopa pakupedzisira. Kana iwe uchida izvo zvaunoona nechishandiso, zviitire iwe nyasha uye utore iyo Reno 5 Pro kana kumirira iyo Nord 2 uye POCO F3 GT.
Chinonyanya kukosha: Iyo Reno 6 Pro ine zvishandiso zveiyo huru yepakati-renhare foni, inosanganisira ine simba skrini, ine simba hardware, uye yakamira makamera. Asi mutengo wepamusoro unopedzisira waita kuti iyi isave yekutanga.
OPPO Reno 6 Pro 5G Kutanga Maonero: Kugadzirisazve Wakatangira
Oppo Reno 4 Pro Ongororo: Bhegi rakavhenganiswa asi nekubata